भाग १ : कांग्रेस नेतृत्व कोइराला परिवार बाहिर जादै छ !-Nagarikaawaj.com
भाग १ : कांग्रेस नेतृत्व कोइराला परिवार बाहिर जादै छ !
बिहिबार, पुस १६, २०७२
पुस १६ , काठमाण्डौ ।
१३ औं महाधिवेसन नजिकिदै गर्दा कांग्रेसमा फेरि नेतृत्वको दौड सुरु भएको छ । देश भरमा मौसमी चिसो बढ्दै गएको बेला पुराने पार्टी कांग्रेस भित्रभने तापक्रम दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सभापति सुशील कोइराला,वरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले चुनावि दौडधुप सुरु गरिसक्नु भएको छ ।
१२ औं महाधिवेसनमा कोइराला परिवारका उत्तराधिकारी सुशील कोइरालासंग झिनो मतले पराजीत भएका शेरवहादुर देउवा र १२ औं महाधिवेसनमा कोइरालाको सारथी बनेका पौडेल पनि मैदानमा उत्रिए भने के होला परिणाम ? सुशील कोइरालाको साढे पाँच वर्षे कार्यकाल पार्टी गत रुपमा हेर्ने हो भने सवैभन्दा कमजोर देखिन्छ ।
कोइराला पक्षकै एक नेताले भने ‘ निर्वाचित कमिटि बिगठन गरेर टिके प्रथा भातृ संस्थामा सुरु गर्नु र पार्टी संरचना लगभग सुन्य बनाउनुले कोइरालाइ फेरि निर्वाचित हुन केहि असहज होला तर देशका लागी उहाँले संविधान दिनु भयो ।
त्यसको पनि कांग्रेसजनले न्याय गर्ने र फेरि चुनाव जित्ने उनको दावि छ ‘ त्यसमा कोइराला परिवारको विरासत उनका लागी बोनस हुने छ । तर यस पटक कोइराला बिरासतको फर्मुला कति काम गर्छ ! १२ महाधिवेसनमा एक पटक भनेर भोट मागेका कोइराला अब के भनेर भोट माग्छन प्रष्ट देखिएको छैन ।
त्यसैमा उनको सादकी जीवन र पदको लोभि नभएको भन्ने फर्मुला पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसंगै सति गइसकेको अवस्था छ । त्यसो भए अब के भनेर कोइरालाले भोट भाग्ने र दीनेले पनि के भनेर दीने ! बंस व्यवस्थाको सबैभन्दा ठुलो स्तम्ब राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र ल्याउन निर्णयक रोल खेल्ने कांग्रेसीहरु कोइराला बिना पार्टी चल्दैन भनेर मात्र भोट दिन्छन ! कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य श्याम घिमिरे ” कोइराला परिवार अहिले सबै भन्दा बढी कमजोर भएको स्विकार गर्छन ।
कोइराला कमजोर भएका कारण स्वभाविक रुपमा कोइराला बिरोधि खेमा बलियो हो ” सुशील कोइरालाको कार्यशैली र उनका सहयोगीहरुका कारण कोइराला परिवार कमजोर भएको उनको तर्क छ ।
त्यसको भए बिलयो के त ! घिमरे भन्छन ” रामचन्द्र दाइको स्थान कहाँ हो ? उहाँ कोइराला बिरोधि कि कोइराला पक्षधर ? कोइराला खेमाको उम्मेदवार सुशील आफै भएपछि रामचन्द्रदाइको ठाँउ मैले देखेको छैन, यस्तो अवस्थामा स्वभाविक हो आजको दिनमा कोइराला बिरोधि खेमाको नेता देउवालाइ फाइदा हुने देखिन्छ” त्यसको भए के देउवाका लागी आगमी महाधिवेसन नेतृत्व हातमा लिन सहज छ ? देउवा निकट एक नेता भन्छन ” सहज छ , किन कि कांग्रेस अब कुनै परिवारको दास बनेर बस्न सक्दैन ।
कोइरालाबाहेक अरु सभापति हुनै नपाउने भए जनताका छोराछोरी किन कांग्रेस हुने ? सबैलाइ थापा छ सुशीलजी पारिवारीक विरासत जोगाउनका लागी मात्र मैदानमा उत्रिदैछन। यस्तो अवस्थामा धेरै साथीहरु खुलेर नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा लाग्छन,खुलेर नलाग्नेहरु पनि भित्रिरुपमा सहयोग गर्छन । यो सहयोग देउवाका लागी भन्दा पनि पार्टीलाइ कुनै अमुक परिवारबाद बाट बाहिर ल्याउन र जनताको पार्टी बनाउनका लागी हो ।
त्यसैमा सुशीलजीले चलाएको कांग्रेस भोगेर सबै आजित भइसकेका छन । धेरै पछि जनताको छोरो कांग्रेस सभापतिको नजिक पुगेको छ ” कांग्रेस युवा नेता नैनसिंह महर पनि देउवाका लागी यस पटक धेरै सहज देख्छन उनि भन्छन “कोइराला बिरोधि वा पक्ष भनेर होइन पार्टीलाइ चलाएमान बनाउन र सुशील कोइरालाको कार्यकालमा भएको संगठनको सुन्यतालाइ चिर्न पनि अब देउवाको आवश्यक्ता भएको हो ” महरको तर्क छ ” यो पार्टीमा युवा,महिला,दलीत,मधेसी,थारु,जनजाती सबैलाइ आजसम्म सबैभन्दा बढी अवसर दिने देउवा मात्र हुन । कर्णाली,दलीत,मधेसी र जनजातीलाइ पार्टीमा आरक्षण दिने देउवा पहिलो व्यक्ति हुन,जिवनभर कांग्रेसका लागी सडकबाट लडेको जनताको छोरो हुन देउवा।
यस पटक सबै कार्यकर्ताले देउवालाइ न्याय गर्नेछन ” यसैमा महर ले थपे” हो देउवादाइबाट प नि कार्यकर्ताले धेरै सुधारको आशा गरेका छन । उहाँले सवैलाइ भन्नु पर्छ म कसैलाइ अन्याय हुन दिन्न,पार्टीका सबै बैठक नियमित र पार्टी कार्यलयमानै गर्छु, पार्टीमा युवा नेतृत्वमाथी जुन राजनीतिक अपराध भइरहेको छ त्यो अन्त्य गर्छु,भातृ संस्थाको महाधिवेस यति समय भित्र गर्छु भन्ने प्रतिबद्दता आउनु आवश्यक छ र पछि त्यसको अक्षरस कार्यन्वयन पनि हुनु पर्छ” यस पटक नेतृत्व कोइराला परिवारबाट बाहिरजाने कोइराला परिवारकै सदस्य बताउन थालेका छन र त्यसको अपसज सुशील माथी लगाइरहेका छन । नाम नबताउने सर्तमा कोइराला परिवारका एक सदस्यले भने “१९ महिना सकारका चलाउदा सुशील दाले कुन कांग्रेसीलाइ के गर्नु भो ? साढे पाँच वर्ष पार्टी चलाउदा किन संगठन चलाएमान बनाउनु भएन ?
भातृ संस्थाको अधिवेसन अन्तिम समयमा किन रोक्नु भयो ? पार्टी भित्रको चुनाव आफुले मन नपराएको पक्षले जीत्दैछ भन्दैमा अधिवेसनै रोक्नु सुशीलदा ले राजनीतिक अपराधनै गर्नु भएको हो । उहाँको कार्यकालमा भएका सवै भातृसंस्था देउवाजीले जीत्नुको कारण पनि यहि हो “।
क्रमश यसको भाग दुइ भोली प्रकाशीत गर्ने छौ ।